कहिल्यै दूधमा घ्यू मिसाएर खानुभएको छ ? | Esajhakura
गृह पृष्‍ठ खबर कहिल्यै दूधमा घ्यू मिसाएर खानुभएको छ ?
कहिल्यै दूधमा घ्यू मिसाएर खानुभएको छ ?
प्रकाशित मिति : २०७९ बैशाख ५ , सोमबार ०८:०८
दूधमा घ्यू मिसाएर पिउनु एक पुरानो आयुर्वेदिक विधि हो। यति मात्र होइन, एनसीबीआईले घ्यूका फाइदाहरू पनि बताएको छ । घ्यू र दूधको आ–आफ्ना फाइदाहरू छन् तर, सँगै यो धेरै समस्याहरूको लागि रामवाण औषधि हो।
एक गिलास मनतातो दूधमा एक चम्चा घ्यू मिसाएर पिउनाले तपाईंको समग्र स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक साबित हुन सक्छ। जान्नुहोस् कसरी ?
पाचन प्रणालीको लागि लाभदायक
पेटको हरेक समस्यामा एक गिलास दूधमा एक चम्चा घ्यू मिसाएर सेवन गर्नाले फाइदा पुर्याउँछ । अध्ययनले देखाएको छ कि एक गिलास दूध र बेसारको साथ घ्यू पिउने प्रणालीबाट हानिकारक विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निस्कन्छ। यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ। तातो दूध र घ्यूमा बेसार मिसाएर पिउनाले झनै फाइदा हुन्छ ।
मेटाबोलिज्मलाई बढावा दिन्छ
सुत्ने समयमा दूधसँग घ्यू पिउनाले शरीरको मेटाबोलिज्ममा सुधार हुन्छ । यसले तपाईंको मुडलाई धेरै सुधार गर्नेछ, जबकि स्ट्यामिना बढाउँछ र तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसले कब्जियतमा मद्दत गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ।
घुँडा र हड्डीका लागि लाभदायक
सुत्नुअघि घ्यू दूधमा मिसाएर खाँदा जोर्नी दुख्ने समस्याबाट आराम मिल्छ । घ्यू जोर्नीहरूको लागि एक प्रसिद्ध स्नेहक हो र तिनीहरूको वरिपरि सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, दूधमा क्याल्सियम हुन्छ जसले प्राकृतिक रूपमा हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ। घ्यूमा पाइने भिटामिन के टु ले हड्डीलाई दूधबाट क्याल्सियम सोस्न मद्दत गर्छ र त्यसैले आयुर्वेदमा दूध र घ्यूको मिश्रणलाई फाइदाजनक मानिन्छ।
शारीरिक तनाव कम गर्छ
धेरै तनाव लिनु राम्रो कुरा होइन, र तपाईंले खानुभएको खानाले तपाईंको तनावको स्तर बढाउन वा घटाउन सक्छ । भनिन्छ, कि राति एक कप तातो दूध पिउनाले स्नायुको तनाव कम हुन्छ र मानिसलाई राम्रोसँग निद्रा लगाउँछ। यही कारणले गर्दा यो पेय विशेष गरी अनिद्राबाट ग्रसित भएकाहरूलाई उपयोगी मानिन्छ।
छालाको लागि प्राकृतिक मोइस्चराइजर
घ्यू र दूध दुवै प्राकृतिक मोइस्चराइजर हुन् र छाला सुधार्न जानिन्छ। हरेक रात दूधसँग घ्यू पिउनाले निलो र निर्जीव छालालाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।
त्यसैले आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा दूधसँग घ्यू मिसाएर सेवन गर्नुहोस् र आफ्नो अनुहारमा प्राकृतिक चमक हेर्नुहोस्।
पछील्लो पोस्ट उफ् गर्मी ! कसरी जोगिने ?
अगिल्लो पोस्ट घोषणात्रबारे छलफल गर्न एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दै